I-AutoDesk iya kubonisa eyona RasterDesign -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoDesk izokubonisa okulungileyo kwiRasterDesign
Ngale nto, ngenkqubo yayo yokunyusa kwi-intanethi iya kubonisa iindaba zeemveliso ezikhethekileyo ekuqhubekeni kwemifanekiso; Abasebenzisi banokuthatha inxaxheba kwiingxoxo kwaye babuze imibuzo malunga nengcaciso, ngaphandle kokushiya ikhaya labo okanye iofisi.
Ukuthatha inxaxheba kwinkomfa yewebhu kuyimali. Iziganeko ziza kugcina i-1 ngeyure kwaye ziya kwenziwa ngeSpanish.
Ukuthatha inxaxheba kulula, kufuneka ucofe nje i-Webcast enomdla ukuze ubhalise kwaye, ngaphambi kwewebhu, uya kufumana umyalezo wokuqinisekisa kunye nephasiwedi kunye nolwazi oluyimfuneko lokudibanisa nokuzimasa umsitho.
Guqula kwaye uhlele iifomathi zemifanekiso eyahlukeneyo, iifayile zokuskena, iifoto zangaphezulu kunye nemifanekiso yesatellite kunye noyilo lweRastCAD Raster
2 Oktobha 2008 ngoLwesine
ukusuka kwi-12h ukuya kwi-13h
Yintoni enokulindela kwi-webcast:
Ukufumanisa indlela i-AutoCAD Raster Design (eyayibizwa ngokuba yi-Over Over Overlay) inikezela amandla ase-AutoCAD kunye nemveliso esekelwe kwi-AutoCAD, njenge-AutoCAD Imephu ye-3D.
Phakathi kwezinye izinto, kunye noyilo lweRastCAD Raster ungazihlela kwaye ucoce idatha yakho, ukuguqula ukusuka kwi-raster ukuya kwi-veter, ukwenza inkcazo kunye nokuhlalutya idatha ye-raster, kunye nokusebenza kwemifanekiso.
Imfuno zo bugcisa: Ukufikelela kwinkomfa yewebhu, ufuna kuphela i-PC kunye noxhumo lwe-intanethi kunye nomnxeba.
Kukho nawuphi na umbuzo, ungaqhagamshelana neZiko leeFowuni kwi 902 12 10 38.
Izinto zavela njani
Ukuthelekisa phakathi kweGeomedia neGvSIG
Ndingathanda ukutshintshela uhlobo oluthile lomgca oludibana nobunzima abathile. Kunokwenzeka ukwenza oku ngeRaster Design
Ndicinga ukuba unayo AutoDesk Civil 3D. Kwaye iipolylines zakho zinokuphakama ngokulandelelana kwipropathi yokuphakama.
-Uya kumntu okhangayo kwicala lasekhohlo, apho udala indawo entsha
-nokukhetha okubizwa ngokuba nguNgcaciso kufuneka kudalwe ngaphantsi komhlaba.
-Kukho uphawu olubizwa ngokuba yiContours, nqakraza ngokukhawuleza ukhethe ukhetho olungezayo.
-Ye ke ikucela ukuba ukhethe iipollines zakho eziyinqanaba lamanqanaba akho, kwaye iya kuvelisa iipalvesti zamanqanaba ezisekelwe kwiifolthi zakho.
BREZNER PIO uthi:
NGAPHAMBILI ULAWULO LWENKQUBO YENQUBO, NDINGAFUNA UKUTHOLA INKQUBO YOKUPHATHWA KWENKQUBO NOKUSUSHA IINKCUKACHA. UNGENZA NJANI LONKE OKUYA KUFUNA?
poussette pas cher uthi:
Ndicinga ukuba iblogi yakho idinga itemplate entsha yegama. Downalod de, Le ndawo inomdla kwaye